चितामा टायर जलाएर सहिदको राष्ट्रिय सम्मान? – MySansar
चितामा टायर जलाएर सहिदको राष्ट्रिय सम्मान?
Posted on March 12, 2016 March 13, 2017 by Salokya
भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को गोली लागी निधन भएका कञ्चनपुर पुनर्वास नगरपालिका–८ का गोविन्द गौतमको आज अन्त्येष्टि गरियो। नेपाल सरकारले गोविन्दलाई सहिद घोषणा गरिसकेको छ। उनको अन्त्येष्टि राष्ट्रिय सम्मानका साथ गर्ने निर्णय भए अनुसार प्रहरीले ११ तोपको सलामी पनि दियो। कञ्चनपुरको दोदा नदी किनारमा गौतमको पार्थिव शरीरमा उनका ७२ वर्षीय पिता खेमलाल गौतमले दागबत्ती दिए। उनलाई राष्ट्रिय झण्डा ओढाइएको थियो। तर अन्त्येष्टिको फोटो हेर्दा एउटा कुरा भने चित्त बुझेन- चितामा टायर पनि राखिएको रहेछ।
2 thoughts on “चितामा टायर जलाएर सहिदको राष्ट्रिय सम्मान?”
डाँका नेताहरुलाई सहिद बनाएर मात्र सहिद को सम्मान पुरा हुन्छ ?
हामि नेपालि त्यो गर्न सक्दैनौ ? अनि के भुत्रो को बिर |
यहा इन्डियाको कै खुफिया डाँका को राज छ त् के नौटंकी मात्र ले देश अगि बढ्छ ?
यो त भएन नि राम्रो